एपेक्स र न्यु होराईजनको जित – WicketNepal
एपेक्स र न्यु होराईजनको जित
WicketNepal Staff, २०७३ चैत्र ५, शनिबार ००:००
विकेटनेपाल- ५ चैत्र भैरहवा ।
रुपन्देही क्रिकेट संघको आयोजनामा भैरहवास्थित सिद्धार्थ रंगशालामा जारी शशिकान्त–सकुन्तला बर्मा टि–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा शनिबार भएको पहिलो खेलमा समुहसीको एपेक्स क्रिकेट क्लबले देवदह क्रिकेट क्लबलाई चार विकेट हरायो ।
टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको देवदह १९.४ ओभरमा ९१ रनमै अल आउट भयो । उसका लागि दिपक भण्डारीले २२ रन,रोशन गौतमले १९ रन र सुरज दराईले १५ रन जोडे । ब्याट्सम्यानबिच तालमेल नहुदा देवदहले रन आउटमै विकेट गुमाएको थियो । एपेक्सको बलिङमा अर्जुन बस्याल एक्लैले चार विकेट लिए । महेन्द्र सुबेदी ३ विकेट लिए ।
जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको एपेक्सले १३.५ ओभरमा ६ विकेटको क्षतिमा ९२ रन बनाउदै लक्ष्य पुरा ग¥यो । उसको जितमा महेन्द्र सुबेदीले २५ रनको योगदान दिए । उनि खेलमा म्यान अफ दि म्याच चूनिए । सुसान्त शिंह थापाले २२ रन बनाए । देवदहको बलिङको सुरज दराईले तीन र सर्गम चौधरीले दुई विकेट लिए ।
त्यस्तै शनिबार नै भएको दोस्रो खेलमा समुह डीको न्यु होराइजनले शिवशक्ति क्रिकेट क्लबलाई ३३ रनले पराजित गर्यो । टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको न्यु होराईजले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेटको क्षतिमा १ सय २२ रन बनायो । उसका लागि नुरध्वोज सेनले ३७ रन बनाए । विवेक न्यौपानेले १५ र कुशल मल्लले १३ रन जोडे । शिवसक्तिको बलिङमा विष्णु कटरियाले तीन तथा कृष्ण कार्की र दुर्गेश कुर्मीले २ विकेट लिए ।
जवाफी ब्याटिङमा मैदान छिरेको शिवशक्ति १८ ओभरमा ८९रनमै अलआउट भयो । शिबशक्तिका लागि निकेस जुगजैलीले १८ रन तथा विष्णु कटरिया र इमरान खानले समान १४ बनाए । न्युहोराईजनको बलिङमा कुशल मल्ल,विशाल सुनार र गणेश गौडेलले समान दुई विकेट लिए ।
प्रतियोगिताका विजेताले नगद रु. ५० हजार र ट्रफी, उपविजेताले नगद रु. २५ हजार र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन् ।उत्कृष्ट खेलाडीले नगद रु. १० हजार, बेष्ट ब्याट्सम्यान तथा बेष्ट बलरले नगद रु.५/५ हजार प्राप्त गर्नेछन् l प्रत्येक दिनको म्यान अफ दि म्याचले रु १००० प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिता चैत १२ गतेसम्म संचालन हुनेछ ।